LAYAABKA: Nin Tacsidiisa Oo Socota Soo Dhex Istaagay | Aayaha
Home»ARIMAHA BULSHADA»LAYAABKA: Nin Tacsidiisa Oo Socota Soo Dhex Istaagay
Arrin la yaab leh ayaa ka dhacday xaafad ku taalla ismaamulka Homa Bay ee dalka Kenya, ka dib markii uu munaasabad tacsi ah soo dhex istaagay ninkii loo baroordiiqayay, sida maanta lagu qoray wargeyska Daily Nation.
Ninka tacsidiisa loo fadhiyay oo 38 jir ah ayaa la rumeysnaa inuu geeriyooday muddo hal bil ah kahor.
Mr Kennedy Olwa, oo lasoo tabiyay inuu markii hore qoyskiisa ka maqnaa ku dhawaad 20 sano ayaa si lama filaan ah ku yimid gurigii waalidiintiisa, oo xilligaas ay tacsidu ka socotay, dad bandanna ay kasoo qeyb galeen.
Ninkan ayaa la sheegay inuu tagay magaalo lagu magacaabo Mbita, oo isla dalka Kenya ka tirsan, halkaasoo uu kalluumeyste ka noqday.
Sida laga soo xigtay gudoomiyaha xaafadda Ramba Joseph Ndege, qoyska Mr Olwa ayaa lagu soo war galiyay inuu wiilkooda u dhintay xanuun uu muddo la ildarnaa.
Kennedy Olwa wuxuu yimid tacsidiisa
Reerka ayaa sidoo kale loo sheegay in meydkiisa ay boolisku geeyeen isbitaalka guud ee ismaamulka Homa Bay.
“Qoysku wax waqti ah ma aysan iska luminin, durbaba waxay billaabeen inay aaska diyaariyaan. Koox kalena waxaa loo diray waaxda meydadka lagu keydiyo ee Isbitaalka, isla markiina way xaqiijiyeen in meydka uu boolisku halkaas geeyay uu yahay qofkoodii”, waxaa sidaas yiri Guddoomiye Ndege.
Markaas ka dib ayey qoysku sii guda galeen tacsida wiilkooda ‘dhintay’, waxayna geeridiisa ka shaaciyeen Idaacad maxalli ah, si dadka loo ogeysiiyo, iyagoo kharash bandanna ku bixiyay raashinkii ay ugu talagaleen inay cunaan dadkii tacsida isugu yimid.
Sidoo kale waxaa la diyaariyay lacagihii kale ee ku bixi lahaa aaska.
Dhageysiga geeridiisa oo lagu dhawaaqayo
Si lama filaan ah, Mr Olwa oo Raadiyaha dhageysanaya isagoo shaqadiisa kalluumeysiga ku guda jira ayaa mar qura maqlay in geeridiisa laga shaacinayo Idaacadda, iyadoo markaas la sheegay inuu u dhintay xanuun aan la aqoonin.
“Wuxuu telefoon ka wacay qaraabadiisa, si ay u joojiyaan qorsheynta tacsida iyo aaska meydka. Qaar ka mid ah xubnaha qoyska ayaa loo diray halkaas si ay runta usoo ogaadaan”, ayuu yiri guddoomiyaha.
Sababta ugu weyneyd ee ay qoysku ugu dagdageen tacsida ayaa lagu sheegay inay tahay maadaama wiilkoodu uu horayba uga sii maqnaa mudo 20 sano ah, ilaa waqtigaasna aysan ka helin wax war iyo wacaal ah toona.
Markii ay dadkii runta loo diray tageen goobtii kalluumeysiga, waxay arkeen Olwa oo fayow, wax xanuun ahna aan qabanin, dhimashana iskaba daa.
Laakiin tacsidii guriga lama hakinin wali.
Markii ay xaafaddii soo gaareen waxay u yimaadeen dadkii munaasabadda tacsida isugu yimid oo khudbado jeedinaya.
Mr Ndege ayaa sheegay in qaraabadii soo kaxeysay ninkan ay kasoo gaareen “meydkiisa” oo la aasi rabo.
Mr Olwa ayaa khudbaddii la wareegay, wuxuuna dhammaan eheladiisa u sheegay inuu nool yahay, wax walwal ahna aysan isgalinin.
Meydkii lagu khalday isaga, oo ahaa qof kale ayaa la aasay galabnimadii Sabtida, maadaama ay cidna sheegan weysay.
Dhacdadan ayaa layaab ku noqotay dadkii deegaanka.
Shirkad dooneysa in Kilkilaha haweenka u kireysato inay xayeysiin kusameysato (Daawo Sawirro)
Waxyaabaha Dumarku Sameeyaan Markay Ragga Qiyaanayaan
10-ka Cunno Ee U Wanaagsan Cudurka Sonkoroowga Ama Macaanka [Ka Faa’ideyso]
UGAAR AH DUMARKA: Haddii Aad Calaamadahan Ku Aaragto Ninka Waa Inaad Guursataa